Covid ကြောင့် Stay Home ‌ေနကြတဲ့ ကာလမှာ Vitamin D က ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Jun 1, 2020 Last updated Jun 2, 2020
Vitamin D (ဗိုက်တာမင် ဒီ) ဆိုတာ ဗိုက်တာမင်လို့ ခေါ်သော်လည်း ဟော်မုန်းအလားတူ ရှေ့ပြေး ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေကို မထုတ်ပေးဘဲ အစားအသောက် နှင့် ဖြည့်စွက်စာ တွေမှသာ ရရှိလေ့ ရှိပါတယ်။
” ဗိုက်တာမင် ဒီ ” ကတော့ အခြား ဗိုက်တာမင်တွေလို မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်မှ ထုတ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
ဗိုက်တာမင် D ကို အစားအသောက် နှင့် ဖြည့်စွက်စာတွေမှလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်တာမင် D ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Calcitriol လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းအနေနှင့် ပြောင်းသွားပြီး ကယ်ဆီယမ် ဓာတ် နှင့် ကိုယ်ခံအားကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး အချိုဓာတ် ထိန်းညှိပေးသည့် Insulin (အင်ဆူလင်) ဓာတ်ကိုပါ ညှိနှိုင်းပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗိုက်တာမင် D ဓာတ်ဟာ
အရိုး နှင့် သွားများကို သန်မာစေခြင်း
ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောကို အားဖြစ်စေခြင်း
Insulin ဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးသည့်အတွက် ဆီးချိုထိန်းရာတွင် အကျိုးရှိစေခြင်း
အဆုပ် နှင့် နှလုံး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေခြင်း
တုပ်ကွေးမိနှုန်းကို လျော့နည်းစေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေပါတယ်။
ဘယ်သူတွေက ဗိုက်တာမင် D ဓာတ်ချို့တဲ့ နိုင်ခြေများသလဲ?
အပြင်သွားလျှင် နေရောင်ခံ ခရင် (Sunscreen) လိမ်းသူများ
နေရောင်ခြည် အရ နည်းသော အပူပိုင်းဒေသ (Equator) နှင့် ဝေးသည့် နေရာတွင် နေထိုင်သူများ
ဗိုက်တာမင် D ဓာတ်ချို့တဲ့လျှင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ?
Covid 19 ကြောင့် Home Stay နေကြရတဲ့ ကာလမှာ ဗိုက်တာမင် D ဓာတ်ဟာ အရေးကြီး လာပါတယ်။
Home Stay နေကြရတဲ့ကာလမှာ နေရောင် နှင့် ထိတွေ့မှု နည်းခြင်း အခြေအနေ တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
၎င်းအပြင် အချို့ စမ်းသပ် လေ့လာမှုများတွင် ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်းဟာ covid ရောဂါကို ပိုကူးစက်စေပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ထို့အပြင် ဗိုက်တာမင် D ဟာ ကိုယ်ခံအား ဆဲလ်များစွာများ CD8 ဆဲလ် နှင့် T ဆဲလ် ကို ပိုများစေတဲ့ အတွက် အဆုပ်ထဲ သို့ ဗိုင်းရပ်(စ်) ပိုးဝင်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပိုမို ရောဂါ ကောင်း မွန် အောင် ထောက်ပံ့နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ထို့အပြင် Covid ရောဂါ ခံစားရတဲ့အခါ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ‘Cytokine Strom’ လို့ ခေါ်တဲ့ ရောင်ရမ်းမှု ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်များစွာ ထွက်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ၎င်း အခြေအနေဟာ အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါတယ်။
Vitamin D ဟာ ၎င်း Cytokine လို့ ခေါ်တဲ့ ရောင်ရမ်းမှု ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ကို လျှော့ချပေး တဲ့အ တွက် ထိုအခြေအနေတွေမှာ အကျိုးကျေးဇူး ရှိစေတယ်လို့ ချို့တဲ့ခြင်း မရှိစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန် Vitamin D ဓာတ် ချို့တဲ့တယ်လို့ ယူဆမလဲ?
12 ng/ml အောက်ကို ဗိုက်တာမင် D ချို့တယ် တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိက်မိခင်များ – 600 IU (15 mcg)
အသက် 70 နှင့် အထက် အဖိုးအဖွားများ – 800 IU (20 mcg)
ကလေးအစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းပို ပိုအားဖြစ်စေဖို့ ဘာတွေ ပိုကျွေးသင့်သလဲ?
ကလေးဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း နဲ့ Probiotics / Prebiotics တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ